R.W Cumar, Cabdi Wali Gaas iyo Xubno Turkiga ka socda oo kormeeray Garoonka Diyaaradaha Garowe(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
R.W Cumar, Cabdi Wali Gaas iyo Xubno Turkiga ka socda oo kormeeray Garoonka Diyaaradaha Garowe(Daawo Sawirada)
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, oo weheliyo Madaxweynaha Maamul Gobolleedka Soomaaliyeed ee Puntland, Mudane Cabdiweli M. Cali Gaas, wafdi ka socda Dawladda Turkiga oo hoggaaminayo Danjiraha Dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya, masuuliyiin ka tirsan Xukuumadda Federaalka ah iyo Puntland, ayaa maanta kormeeray Garoonka cusub oo laga dhisayo duleedka magaalada Garowe.
Ra’iisul Wasaaraha iyo wafdiga la socday ayaa kormeer ku tagey qeybaha kala duwan ee garoonka oo xiligaas ay shaqadu ka socotay, waxana ay warbixino ka dhageysteen Shirkadda gacanta ku haysa dhismaha garoonka oo laga leeyahay dalka Turkiga. Ra’iisul Wasaaraha ayaa boggaadiyey horumarka ka socda magaalada Garowe , gaar ahaan dhismaha garoonkan oo loo dhisi doono qaab casri ah.
“Shirkadaha caalamka iyo kuwa kale ee ay Soomaalidu leeyihiin waxaan leenahay hala yimaado dalka oo hala maalgeshado, si ay dib u soo laabtaan guud ahaan adeegyadii bulshada u baahnaayeen, tani waa horumar uu dalka ku talaabsanayo” ayuu yiri R/Wasaare Cumar.
Dhaqaalaha ku baxaya dhismaha Garoonka Magaalada Garowe ayaa waxaa bixinaya Boqortooyada Kuwait, waxana uu qeyb ka yahay mashaariic uu dalkaas ugu deeqey Dawladda iyo Shacabka Soomaaliyeed.
Ciidamada Kumaandooska oo ka fuliyay howlgal gaar ah gobolka Sh/hoose
Faah-faahin ka soo baxeysa Qaraxa Ismiidaaminta ee Gaalkacyo ka dhacay iyo Shabaab oo sheegtay(Daawo Sawirada)